Ihe kacha mma 24 Sun Tattoos Echiche Ide maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ogologo oge gara aga, a na-ejikọta anyanwụ na ọtụtụ ihe ọ pụtara karịsịa mgbe anyị na-atụle ihe osise ahụ site na mmalite Mayan ma ọ bụ ọbụna ihe odide ndị Ijipt. Enweghi ihe okike ma obu udi nke anyi huru na aru ndi nwoke na ndi nwanyi.
A na-ewu ewu na-ewu ewu mgbe niile n'oge ochie. Ihe omimi nke #sun bu ihe na-adiri ma nwoke ma nwanyi. Ihe anyanwụ pụtara pụrụ ịbụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ dị mma ma nke a dabere na omenala si ebe mmadụ si abịa. Ọ bụghị ihe nzuzo na a gaghị egbochi ndụ n'enweghị anyanwụ. Anyanwụ nwere ike ịpụta ndụ, ike, ike, ịhụnanya na nkwado ndụ. Ọ pụkwara ịpụta nlọghachi ọzọ na ụfọdụ okpukpe nwekwara ihe pụrụ iche banyere anyanwụ. E nwere ụzọ dịgasị iche iche a pụrụ isi dọta ọkpụkpụ anyanwụ na-enwe mmetụta ha. Anyanwụ na-ebili pụrụ ịpụta ike Chineke na ịdị ebube. Ọtụtụ ndị na-eji anyanwụ na-apụta dịka egbugbere ọnụ nke anyanwụ nke ọtụtụ ndị na-akwado egwuregwu na-eji.
Onye okachamara na-egbu egbu bụ onye ị chọrọ iji egbu egbu dịka nke a. Ị nụla ebe a na-etinye ebe a na-etinye aka na igbu egbugbu?
Shine ọchị egbu egbu
Ebe e si etinye egbugbu bụ ihe gị na onye na-ese ihe gị nwere ike ime. Akụkụ nke ahụ nke a ga-etinye egbugbu gị dị ezigbo mkpa. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ebe e nwere ike igbu egbugbu.
Ụdị Achịcha Na-adịghị Mma
Ogbugbu a dị ezigbo mma n'ihi na ọ na-etinye ya n'ahụ. Enweghị akụkụ nke ahụ nke egbugbu gị na-enweghị ike ịchọ mma.
Ike Sun Sun
Anyị ahụwo oge mbụ ndị mmadụ na-eji tattoos na mpaghara ụfọdụ nwere uche.
Ụdị Ahịa Kwadoro
Na-egbu egbu egbu egbu
Mgbe ị na-azụ ahịa, ọ dị mfe ịnweta ezigbo ego maka egbugbu gị. Ị ghaghị imebi ahụike gị ma ọ bụrụ na ị na-egbu egbu.
Nke a bụ ihe mere ị kwesịrị iji jiri ọkachamara igbu egbu.
Ụdị Epeepe Dị Mma
E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara bụ ndị nọ n'ebe ahụ iji kwado ọdịdị okike gị ma a bịa n'inwe egbu egbu dị egwu dị ka nke a.
Zuru Azu Sun
Ruo ọtụtụ afọ, anyị ahụwo ndị mmadụ na-agbanye egbu egbu n'ihi na ọ dị mma na akpụkpọ ahụ. E nwere ụdị dị iche iche nke na-egbu egbu.
Ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ụzọ ọnya ahụ dị. E nwere ndị chọrọ ịmepụta egbugbu ha ka ha dị iche na ọha.
Azụ Ụdị Sun
Ụdị aghọwo ihe na-emekarị nke na-agaghị adaba ruo ọtụtụ afọ. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi otú ndị mmadụ na-esi abịa na-apụta ìhè.
Ị nwere ike ịgbakwunye ụcha ma ọ bụ ọbụna na-agbagharị ka ụdị igbu gị dị.
Anyanwu aghọwo ihe a na-ewu ewu nke na-anọchite anya mmeghari ohuru, ike na ike. E weere ya dị ka otu n'ime ụdị igbu egbugbu mbụ a maara. isi iyi
E nwere mgbe a na-ele anyanwụ anya maka ndị America oge mbụ bụ onye na-elekọta Ụwa. A kwenyere na ọ na-eweta uto, ọkụ na ịdị mma. isi iyi
A na-efe anyanwụ n'etiti Celtic na Norse na Europe. Ọ pụtaghị na onye ọ bụla nke ink anyanwụ na-efe ya. isi iyi
E nwere ụzọ iji mee ka egbu egbu gị dị nnọọ ka mgbe ị na-ahọrọ ọdịdị, ụdị, imewe na agba iji mee ka akụkụ ahụ gị mara mma isi iyi
Mgbe a bịara n'inwe njide anyanwụ, e nwere ọtụtụ narị atụmatụ ịhọrọ. isi iyi
I nwere ike ikpebi ịnwe ụdị igbu egbu ọ bụla dịka ihe ịchọrọ ịkọ. O nwere ike ịbụ akụkọ, ihe nkuzi ma ọ bụ ọbụna nchetara ihe ịchọrọ ka ị ghara ichezọ.
Mgbe a na-ahọrọ ịhọrọ ntutu dị ka nke a, ọ na-ewe ọtụtụ njikere ị nweta ihe dị mma dị ka egbu a. isi iyi
azụ azụechiche egbugbukoi ika tattoondị na-egbuke egbukemma tattoosndị mmụọ oziAnkle Tattoosegbu egbu diamondarịlịka arịlịkaegbu egbu ebighi ebiNtuba ntughariegbu egbu hennaegbu egbu okpuenyi kacha mma enyiGeometric Tattoosegbu egbu mmiriudara okooko osisienyí egbu egbumehndi imewedi na nwunyeEgwu ugona-egbu egbungwusi pusiọdụm ọdụmima ima mmaokpueze okpuezerip tattoosỤdị ekpomkpaaka akaaka mma akaegbu egbu osisi lotuszodiac akara akarannụnụụkwụ akana-adọ aka mmaaka akaegbugbu egbugbuakara ntụpọụmụnne mgbuagbụrụ eboegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbuakwara obiegbu egbu egbuegwu egwuegbugbu maka ụmụ agbọghọọnwa tattoosakpị akpịUche obin'olu olu